မြန်မာ, 15 သြဂုတ် 2017 page 1
ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေအနေနဲ့ မြန်မာစာပေ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အမြဲထိတွေဆက်စပ်နိုင်ဖို့ စာပေဟောပြောပွဲတွေ အလျဉ်းသင့်သလို ကျင်းပသွားမယ်လို့ မေရီလန်းပြည်နယ်က စာပေဟောပြောပွဲ စီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။ စာပေဟောပြောပွဲအကြောင်း ကိုအောင်အောင်က ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်။
သတင်းအကျဉ်းချုပ် (၀၈. ၁၄. ၂၀၁၇)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက်မြို့က ကုသလသမဂ္ဂ ဌာနချုပ်မှာ သြဂုတ်လ ၉ ရက် ကနေ ၁၂ ရက်နေ့အထိ လေးရက်တာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အကြိမ် (၂၀ ) မြောက် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းရဲ့ လူငယ်ညီလာခံကို မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပြီး ကိုဇွဲပြည့်ဖြိုး တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ကွယ်လွန်သူ ဦးအောင်ရွှေအပေါ် လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းတချို့ရဲ့ သုံးသပ်ချက်
ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌဟောင်း ဦးအောင်ရွှေဟာ နိုင်ငံရေးအရ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်ခဲ့ပေမယ့် စစ်အစိုးရလက်ထက် NLD ရပ်တည်ရှင်သန်နိုင်အောင် တာဝန်ယူပြီး အခက်အခဲတွေကို ဖြတ်သန်းကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သလို၊ နောက်ဆုံးပါတီခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကနေ အနားယူသွားချိန်မှာ ပါတီနဲ့ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်ပုတ်ခတ်ပြောဆိုမှုတွေ မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ ပြည်ပရောက် NLD အမတ်ဟောင်းတွေနဲ့ မြန်မာ့အရေး ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့သူတွေက သုံးသပ်ပါတယ်။